PUGESE IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Pugese Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Chinese Chinese Crested / Pug yakavhenganiswa Imbwa Dzakaberekwa
'Klaus-Oleg weChinese Crested x Pug isina mbwanana isina kuratidzwa pano pamwedzi mitanhatu inorema kutenderera 9 - 10 lbs. Awana izwi rake. Iye akanaka kwazvo 'muchengeti'. Akavhundutsira gororo kure kunyangwe ari mudiki. Ane imbwa hombe kuhukura .... lol. '
staffordshire terrier uye mutambi wetsiva
Iyo Pugese haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Chinese Crested uye iyo Pug . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Zeniba the Pugese (Pug / Chinese Crested mix) mbwanana yava nemavhiki gumi nepfumbamwe- 'Zeniba mukadzi wePugese Powder Puff. Musanganiswa mukuru pakati pePug neChinese Crested. Mumufananidzo uyu ndakamupa ' hupfu hwehupfu 'clip iyo inongoveura kumeso / mutsipa nzvimbo yakachena. Dhamu rake rakachena Pug , sir yake a Yakachena isina Bvudzi Chinese Yakabatwa . Akauya achibva marara e6 puppies , 4 ayo aive asina bvudzi mamwe maviri aive akazara mvere. '
Musia the Pugese (Chinese Crested / Pug sanganisa mhando imbwa) ane makore matatu ekuberekwa
Klaus-Oleg the Pugese ave nemwedzi mina nehafu yemwedzi— 'Klaus-Oleg akangwara kwazvo asi anodawo kwazvo kambani yevanhu. Iye anovenga kusara ega . Haana vhudzi uye anotambura nehurema husina kunyorova. Semwana wemwedzi mina-ane makore ari 2.5 kgs (5 1/2 mapaundi) uye anotarisirwa kukura asingasvike 3.5 kgs (8 mapaundi). Klaus anohukura kana mumwe munhu akagogodza pamusuwo asi neimwe nzira imbwa yakanyarara. Anoda vana uye dzimwe mhuka uye inotamba chaizvo uye nyore kudzidzisa kushandisa mibayiro. Akanga ari chaizvo nyore kudzimba . '
Klaus-Oleg the Pugese pamwedzi 4 1/2 yekuberekwa
german mufudzi beagle sanganisa vana
Klaus-Oleg the Pugese (Pug / Chinese Crested musanganiswa rudzi imbwa) pamwedzi mitanhatu yekuberekwa
Chinyorwa cheChinese Crested Imbwa Sanganisa Kusanganisa Imbwa
Chinyorwa cheSilky Terrier Sanganisa Inobereka Imbwa
Chowpit Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
American Bulldog Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Chinyorwa cheBasenji Sanganisa Yakarera Imbwa
Chinyorwa cheBelgian Malinois Sanganisa Imbwa Dzembudzi
Siberian Boston Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Imbwa yeLabernard Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Rottweiler Imbwa Inobereka Mifananidzo, 3
American Bully Imbwa Inobereka Mifananidzo, 2
bhuruu mhino pitbull puppies mifananidzo
chii chinonzi tibetan mastiff yakasanganiswa
basset hound uye yegoridhe retriever musanganiswa
coton de tulear shih tzu
australia mufudzi poodle musanganiswa vana